Blogging Corporate: Tobanka su'aalood ee ugu sareeya shirkadaha | Martech Zone
Arbaco, Juun 18, 2007 Tuesday, May 3, 2016 Douglas Karr
Haddii ay jiraan hal shay oo dib kuugu soo celinaya xaqiiqda, waxay la kulmeysaa ganacsiyada gobolka si looga wada hadlo blogging iyo warbaahinta bulshada.
Fursadaha ayaa ah, haddii aad tan akhrinaysid, waxaad fahamsan tahay baloog garaynta, baraha bulshada, calaamadeynta bulshada, hagaajinta mashiinka raadinta, iwm.
Bannaanka 'blogoshere', shirkadaha Mareykanka wali waxay halgan ugu jiraan helitaanka magac domain iyo sameynta bog internet. Runtii waa yihiin! Kuwo badan ayaa wali raadinaya Classifieds, Yellow Pages iyo Direct Mail si ereyga loo gaarsiiyo. Haddii aad lacag haysato, waxaa laga yaabaa inaad xitaa u guurto Raadiye ama TV. Kuwani waa dhexdhexaad dhexdhexaad ah, miyaanay ahayn? Kaliya calaamadee calaamad, bar, xayeysiis… oo sug in dadku arkaan. Maya Analytics, pageviews, booqdayaasha gaarka ah, darajada, permalinks, pings, trackbacks, RSS, PPC, matoorada raadinta, darajaynta, maamulka, meeleynta - kaliya rajee oo ku ducee inuu qof dhageysto, daawado ama eego shirkaddaada.
Waxyaabaha shabakadani waa ma u fudud shirkadda caadiga ah. Hadaadan i rumaysanayn, ku jooji gobal Shirka Webka bilowga ah, Shirka Suuqgeynta gobolka ama Rugta Ganacsiga. Hadaad runti rabto inaad naftaada la tartanto, fursad u hel inaad hadasho. Waa indho fur!
Tobanka Su'aalood ee ugu Sareeya Qorista Shirkadaha:
Waa maxay blogging?
Maxay tahay inaan u qorno?
Waa maxay farqiga u dhexeeya qorista iyo degellada?
Waa maxay farqiga u dhexeeya qorista iyo websaydhka?
Intee in le'eg ayey ku kacaysaa?
Immisa jeer ayaan sameynaa?
Miyay tahay inaan ku martigelinno balooggeena degelkeenna ama aan u isticmaalno xalka martigelinta?
Ka waran faallooyinka xun?
In ka badan hal qof baa wax ku qora?
Sideen u xakameynaa sumadeena?
Aniga oo ku dhex milmaya warshadaha, waxaa i yaabisay markii aan maqlay su'aalahan. Qof kastaa ma ogeyn ku saabsan qorista? Suuqge kasta kuma xidideysanayn baraha bulshada sidii aan ahaa?
Waa kuwan Jawaabahaygu:
Waa maxay blogging?Blog waa u gaaban yahay weblog, joornaal internetka ah. Caadi ahaan, baloog wuxuu ka kooban yahay qoraallo si heer sare ah loo kala soocay oo si joogto ah loo daabacay. Qoraal kastaa wuxuu u eg yahay inuu lahaado cinwaan web gaar ah oo aad ka heli karto. Qoraal kasta sida caadiga ah wuxuu leeyahay farsamo faallo si looga codsado jawaab celinta akhristaha. Blogs waxaa lagu daabacaa iyada oo loo marayo HTML (goobta) iyo RSS cunto siiya.
Maxay tahay inaan u qorno?Blogs sidoo kale waxay leeyihiin teknoolojiyad hoose oo u gaar ah kuwaas oo ka faa'iideysanaya teknoolojiyada mashiinka raadinta iyo la xiriirka boggaga kale. Bloggers-yada caanka ah waxay u muuqdaan inay u muuqdaan inay yihiin hogaamiyayaal feker ahaan ka shaqeeya warshadaha - iyagoo gacan ka geysanaya kor u qaadista shaqooyinkooda ama ganacsiyadooda. Blogs waa hufnaan iyo isgaarsiin - ka caawinta ganacsiyada inay abuuraan xiriiro macaamiishooda iyo rajooyinkooda.
Waa maxay farqiga u dhexeeya qorista iyo degellada?Waxaan jecelahay inaan isbarbar dhigo websaydh iyo calaamadda ka baxsan dukaankaaga oo balooggaagu waa isgacan qaadka marka ilaaliyaha albaabka ka baxo. Bogagga internetka ee 'Brochure' waa muhiim - waxay dejinayaan alaabtaada, adeegyadaada, taariikhda shirkadda, waxayna ka jawaabayaan dhammaan macluumaadka aasaasiga ah ee laga yaabo in qof uu ka doonayo shirkaddaada. Blog waa meesha aad dhab ahaan ku soo bandhigeyso shakhsiyadda ka dambeysa shirkaddaada in kastoo. Boogga waa in loo adeegsadaa waxbarid, isgaarsiin, falcelinta dhaleeceynta, wadista xamaasadda iyo taageeridda aragtida shirkaddaada. Caadi ahaan waa wax yar oo rasmi ah, oo aan yareyn, waxayna siisaa aragti shakhsi ah - maahan kaliya suuq geyn.
Waa maxay farqiga u dhexeeya qorista iyo websaydhka?Waxaa laga yaabaa in waxa ugu weyn ee ku saabsan balooggu yahay in blogger uu wado fariinta, ee uusan aheyn booqdaha. Si kastaba ha noqotee, booqdaha ayaa hela jawaab celin. Dood-wadaag websaydh ah ayaa u oggolaanaya qof walba inuu bilaabo hadalka. Waxaan u muuqdaa inaan u arko hadafka labada si kala duwan. IMHO, fagaarayaashu ma badalayaan baloogyada ama si kadis ah - laakiin waxaan arkay hirgelinta guul labadaba.
Intee in le'eg ayey ku kacaysaa?Sidee ayuu free dhawaq? Waxaa jira codsiyo boggag cod ah oo aan halkaa ku leenahay - labadaba martigelin iyo softiweer aad ku maamuli karto bartaada. Haddii dhagaystayaashaadu ay badan yihiin, waxaad ku dhex gali kartaa qaar ka mid ah arrimaha baaxadda leh ee laga yaabo inay kaaga baahan yihiin inaad ku iibsato xirmo martigelin wanaagsan - laakiin tani waa wax aad u yar. Istaraatijiyadaha wax lagu qoro oo aad la midowdo boggaaga yar ama sheygaaga, in kastoo! Labaduba si wanaagsan ayey isu ammaani karaan!
Immisa jeer ayaan sameynaa?Joogtayntu muhiim uma aha sida joogtada oo kale. Dadka qaarkiis waxay iweydiiyaan inta jeer ee aan ka shaqeeyo balooggeyga, uma maleynayo inaan caadi ahay. Guud ahaan waxaan sameeyaa 2 farriimood maalintii is mid baa fiidkii ah kan kalena waa waqti go'an (horay loo sii qoray) oo soo baxa maalintii. Fiid kasta iyo subax kasta waxaan caadi ahaan ku qaataa 2 illaa 3 saacadood shaqaynta boggayga ka baxsan shaqadayda caadiga ah.Waxaan arkay baloogyo cajiib ah oo dhajiya daqiiqado kasta iyo kuwa kale oo dhajiyay usbuucii hal mar. Kaliya garo in markii aad ku dejiso rajooyinka qoraallo joogto ah inaad ilaaliso rajooyinkaas, haddii kale waxaad waayi doontaa akhristayaasha.
Miyay tahay inaan ku martigelinno balooggeena degelkeenna ama aan u isticmaalno xalka martigelinta?Haddii aad muddo dheer akhristaheyga ahayd, waad ogaan doontaa in shaqsiyan aan jeclahay in aan martigaliyo boggeyga gaarka ah sababtoo ah dabacsanaanta ay i siiso xagga isbeddelka naqshadeynta, ku darista astaamaha kale, wax ka beddelka koodhka aniga, iwm. fariimahaas, in kastoo, xalalka martigelinta ay runti xadka ka qaadeen. Hadda waad ku shaqeyn kartaa xalka martigelinta, waxaad leedahay magacaaga magacaaga, habeyn mawduucaaga oo ku dar qalab iyo astaamo ku dhowaad sidoo kale haddii aad adigu martigelin laheyd. Blogger laakiin si dhakhso leh ayey ugu wareejisay xalka martigelinta iyadoo la adeegsanayo WordPress. Waxaan rabay inaan 'lahaado cinwaankeyga' oo aan u sii habeeyo barta. Kama niyad jabin doono qof kasta - xitaa shirkad - adeegsiga xalka martigelinta sida Vox, Nooc, Blogger or WordPress kaliya in la bilaabo oo la tijaabiyo.
Haddii shirkaddaada runti ay dhab tahay, waxaan gabi ahaanba baari lahaa qaar ka mid ah baakadaha Blogging 2.0 sida Isku-darka!
Compendium Software waxaa bilaabay labo saaxiib oo wanaagsan oo aan saaxiib nahay oo kala ah Chris Baggott iyo Ali Sales, waana isbadalka soo socda ee barta wax lagu qoro.
Ka waran faallooyinka xun?Dadka qaarkiis waxay aaminsan yihiin inaadan yeelan karin baloog daacad ah illaa qof iyo qof walba ka faalloon karo - xitaa haddii ay been tahay ama cay tahay. Tani waa wax fudud. Waad gabi ahaanba ka bixi kartaa faallooyinka - laakiin waxaad waayi doontaa waxyaabaha qiimaha leh ee isticmaalaha soo saarey! Dadyowga ka faallooda bartaada waxay ku darayaan macluumaad, ilo, iyo talo - iyagoo ku daraya labadaba qiime iyo nuxurba.Xusuuso: Mashiinnada raadinta ayaa jecel waxyaabaha. Macluumaadka isticmaalaha la soo saaray ayaa ah mid cajiib ah maadaama wax lacag ah kaa bixinaynin laakiin waxaad siisaa dhagaystayaashaaga wax badan! Halkii aad ka bixin lahayd faallooyin, si fudud u dhig dhexdhexaadinta faallooyinkaaga oo meel mari siyaasad faallo fiican Nidaamkaaga faallooyinka wuxuu noqon karaa mid gaaban oo fudud, Haddii aad u jeeddo - anigu ma dhajinayo faalladaada! Fikrad ahaan qaab dhismeed oo taban ayaa ku dari kara wadahadalka oo u tusaya akhristayaashaada shirkad noocee ah aad tihiin. Waxaan u muuqdaa inaan oggolaado dhammaantood laakiin kuwa ugu qosolka badan ama SPAM. Markii aan tirtiro faallo - inta badan waxaan email u diraa qofka una sheegaa sababta.
In ka badan hal qof baa wax ku qora?Xaqiiqdii! Haysashada Qaybaha iyo Bloggers-ka mid kasta oo ka mid ah qaybahaas waa wax cajiib ah. Maxaa cadaadiska oo dhan loo saarayaa hal qof? Waxaad haysataa shirkad dhan oo karti leh - u adeegso. Waxaan u maleynayaa inaad si dhab ah ula yaabi doontid cida kuugu xoog badan uguna caansan ee wax qora ee internetka wax ku qora (Waan jeclaan lahaa inaan sharad geliyo inaysan noqon doonin dad suuq geynaya!)
Sideen u xakameynaa sumadeena?80,000,000 baloogyada adduunka oo boqolaal kun lagu daro usbuuc walba… malee? Dadku adiga ayey wax kaa qorayaan. Abuur a Google Alert shirkadaada ama warshadahaaga waxaadna ogaan kartaa inay dadka kaa hadlayaan. Su’aashu waxay tahay ma rabtaa iyaga si aad u xakameyso astaantaada ama aad hubinta sumaddaada! Blogging-gu wuxuu siiyaa heer daah-furnaan oo shirkado badani aysan ku qanacsanayn. Waxaan dhahnaa waxaan dooneynaa inaan noqono kuwa hufan, waxaan dooneynaa inaan dhiirigalino daahfurnaanta, laakiin waxaan ka baqeynaa inaan dhimano. Waa wax shirkaddaadu si fudud uga adkaato. Si daacadnimo ah oo dhan, in kastoo, macaamiishaadu iyo rajadaadu horeba u aqoonsadeen inaadan kaamil ahayn. Qalad ayaad galaysaa. Waxaad ku khaldami doontaa bartaada, sidoo kale Xiriirka kalsoonida ee aad la dhiseyso macaamiishaada iyo rajadaada ayaa ka adkaan doonta wax-is-daba-marin kasta oo aad sameyso.
Tags: hubkaasu'aalaha bartaxardhobrandshirkadda blogblogging shirkadahablogging shirkado loogu talagalay dummiesimisa ayey ku kacaysaa qorista barta internet-kaintee jeer ayey tahay in aan wax ku qornofaallooyinka xunwaa inaan martigelinnaa bartayadawaa maxay baloogguwaa maxay farqiga u dhexeeya blog iyo degelmaxaan u qornaa
Jul 19, 2007 markay tahay 2:19 PM
Blogging-ku uma fududa sidaan u maleeyay inay ahayd, waxaan qabaa su'aal lil ah, waxaan ka imid Venezuela, blogging-ka halkaan si aad ah looma yaqaan yahoo ama Google… laakiin waa inuu noqdaa suuq wanaagsan dhowr sano gudahood, marka hadda waxaan ku bilaabayaa blog fudud http://bajaloads.com (lolz Waxaan ku jiraa liiska calaamadaha), waxaan jeclaan lahaa inaan balaariyo astaanteyda BajaLoads
(Baja = hoos Isbaanishka)… sameynta baloogyo warar ah oo Isbaanish ah, walaashey waxay maamuli doontaa baloog, gabadheyda midkale, iyo saaxiibkey midkale… dhamaantoodna waxay kuwada baxayaan Isbaanish… isla waqtigaasna waxaan ahay uga faafi iyaga jaamacadda, safka… meel kasta oo aan lagaraacin, su'aashu waa tan: miyaan helayaa darajo wanaagsan oo SEO ah haddii aan ku dhajiyo faallooyinka sidan oo kale ah qoraalada maqaalka ee aan jeclahay? (maaddaama ay tahay inaan siiyo urlkeyga oo ay ku qoran tahay magaceyga)
Jul 19, 2007 markay tahay 2:30 PM
post aad u fiican. Waxaan marwalba layaabayaa faham la'aanta guud ee dadweynaha. Markaad dhex dabaalanaysid warbaahinta dhexdeeda, waxaad u maleyneysaa inaad qof walba wax ka ogtahay. iyo haa, waxay ku noqon kartaa wax aad u cabsi badan dadka waawayn ee wax yar ka og internetka, iskaba daa inay wax qoraan. si kastaba ha noqotee, falanqeyn waxtar leh oo ku saabsan ganacsiyada iyo qorista.
Jul 19, 2007 markay tahay 10:02 PM
Ma arki karo faallooyinkeyga, maxay taasi u tahay doug ??
Jul 19, 2007 markay tahay 10:34 PM
Waxay umuuqataa inay yihiin wax bug ah faallooyinka… Waan ka shaqeynayaa… hmmm.
Jul 19, 2007 markay tahay 11:17 PM
markaa markaa ha ka welwelin, waxaan ka hadlayey oo keliya abuurista "Shirkad" u gaar ah dalka Venezuela, maadaama bogagga internet-ka si fiican looga yaqaan here
Waxaan ka fekerayay abuuritaanka domains hoosaadyo sida:
Iyagoo dhammaantood ay wada socdaan walaashey, saaxiibtey iyo saaxiibkeed (ma ahan inaan ku bixiyo intaas inbadan maxaa yeelay faa iidadayda ayaan ku helayaa US $ oo waxaan ku bixin doonaa Ven- bolivares).
su'aashu waa tan, - Miyaan ka fiicnaanayaa meelaynta SEO haddii aan faallo ka bixiyo baloogyada la aqoonsan yahay sidan oo kale? (maadaama ay tahay inaan la wadaago urlkeyga)
Sidoo kale waxaan khadka kula jiraa si aan kuugu tilmaamo: -D, in kasta oo markaan qaatay talooyin aad siisay kuwa wax qora ee wax qora,
nabad bro 😀